Tsy fahampian'ny rotsak'orana : AHIANA HO TAPAKA NY FAMATSIAN-DRANO -
AccueilRaharaham-pirenenaTsy fahampian’ny rotsak’orana : AHIANA HO TAPAKA NY FAMATSIAN-DRANO
Raha ny filazan’ny teknisianina avy eo anivon’ny orinasa Jirama, dia ho tapaka ny famatsiana rano an’Antananarivo sy ny manodidina raha toa tsy hilatsaka ao anatin’ny efatra andro ny orana. Tsy afaka manodina ny milina mpamokatra rano intsony mantsy ny fatran’ny rano ao Mandroseza noho ny hai-tany, tahaka izay miseho amin’ny reniranon’i Sisaony, Ikopa sy Imamba izay tsy ahitana rano intsony amin’izao fotoana izao. Etsy ankilany anefa mbola tsy feno ny fepetra ny amin’ny handatsahana rotsak’orana amin’ny fomba artifisialy noho ny fisian’ny « anticyclone » any amin’ny faritra Atsimon’ny Nosy iny raha ny fanambaran’ireo manam-pahaizana momba izany eo anivon’ny sampana famantarana ny toetry ny andro, na dia efa naneho ny fahavononany aza ny fitondram-panjakana ny amin’ny fanatanterahina izany. Ho vahaolana vonjimaika, dia ho tarihina hamatsy rano an’Antananarivo aloha ny farihin’i Tsiazompaniry izay misy fahatarany hatrany amin’ny 48 ora noho ny halavirana. Tsy hamaha ny olana manontolo anefa izany fa ho an’izay tena laharam-pahamehana ihany aloha.
Raha ny zava-misy, tao anatin’ny herinandro maro izao no efa nilaharana izay tsy izy ny paompin-drano ary tsy afaka manjifa araka ny tokony ho izy ny mponina fa voafetra ihany noho ny filaharana sy ny tosiky ny rano izay kely dia kely. Manararaotra mampakatra ny vidin’ny rano ihany koa ireo izay afaka manao izany. Ahiana hihamafy anefa izany araka ny fampitandreman’ireo tompon’andraikitra raha toa ka tsy hivaha ny olana.
Ankoatra izay dia faritra maro omaly no efa lasibatry ny fahatapahan-jiro lava reny. Tsy teto an-drenivohitra ihany fa hatrany any amin’ny faritra rehetra. Araka ny fitarainan’ny maro dia somary ela kokoa noho ny mahazatra ny faharetany. Tsy miankina amin’ny orinasa Jirama irery intsony ny vahaolana araka izany fa tsy maintsy hifanotofan’ny rehetra. Voatery mampihena ny fanjifana araka izay azo atao ny mpanjifa mba hisorohana ny tsy fisian’ny rano sy ny famatsiana jiro. Voarara ao anatin’ny fotoana voafetra aloha ny famenoana ireny dobo filomanosana ireny, tahaka izany ihany koa ny fanasana fiara sy ny fampiasana fitaovana hampiasana rano.
Business Definition dans Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet
modern clothing stores: You actually make it appear really easy along with your presentation however I in finding this matter to be actually…